NEWS: म्यानपावर व्यवसायीको गुनासो : १४ हजारमा मलेसियामा पठाउन सकिँदैन
म्यानपावर व्यवसायीको गुनासो : १४ हजारमा मलेसियामा पठाउन सकिँदैन
१५ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कामदार मलेसिया जान थालेको १७ वर्षपछि सरकारले मलेसियासँग शून्य लागतको श्रम समझदारी गरेको छ । यसलाई विज्ञहरुले ऐतिहासिक उपलब्धी भनेका छन् । श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले मानव तस्करको ठूलो जालो तोड्ने र कामदारको हित सुरक्षण गर्ने गरी यो समझदारी गरेका छन् । तर, कामदार पठाउने मूल जिम्मेवार म्यानपावर व्यवसायी भने यो समझदारीबाट खुसी छैनन् ।
म्यानपावर व्यवसायीहरुले यो समझदारी मन्त्री गोकर्ण बिष्टको लोकपि्रय बन्ने हतियार मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले १४ हजार रुपैयाँ सेवाशुल्क लिएर मलेसिया पठाउन नसकिने भन्दै कम्तिमा एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिइनुपर्ने बताएका छन् । आखिर म्यानपावर व्यवसायीहरु किन यस्तो ऐतिहासिक श्रम समझदारीको विरोधमा उभिए त ? हामीले म्यानपावरवालाहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङसँग यसबारे सोध्यौं–सरकारले नेपाली कामदारको हितमा हुने गरी मलेसियासँग श्रम समझदारी गर्‍यो । तपाईंहरु त यस्तो ऐतिहासिक समझदारीविरुद्ध सार्वजनिकरुपमै प्रस्तुत हुन थाल्नुभयो नि ? यसमा म्यानपावर व्यवसायीको टाउको किन दुखेको ? हामीले गन्तव्य श्रम सम्झौता या सरकारी स्तरमा समझदारी गर्नुपर्छ भनेर वर्षौंदेखि भनिरहेका हौं । अहिले मलेसियासँग एमओयू भएको छ । कामदारको हितमा यस्ता सम्झौता र समझदारी हुनुपर्छ भन्ने संघको पनि भनाइ हो, माग हो । हामीले वर्षौंदेखि यिनै विषय उठाउँदै आयौं ।
हामीले पहिल्यैदेखि कोटाको सुनिश्चितता गरेर मात्रै श्रम समझदारी हुनुपर्छ भनेका हौं । तर, हामीसँग केही पनि छलफल नगरी समझदारी भएको छ । यो स्वागतयोग्य विषय हो कि सरकारीस्तरमा कामदार लैजाने समझदारी भयो । तर, कोटा तोकिएन । यसले नेपालबाहेक अन्य १० भन्दा बढी देशबाट नेपाली कामदारको विकल्पमा मलेसियाले कामदार लिन सक्छ । समझदारीमा मलेसियाले लैजाने कामदारको संख्या सुनिश्चित नगर्दा हामीलाई दुःख लागेको छ ।
त्यसैले यो हतारमा गरिएको समझदारी हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । पर्याप्त गृहकार्य र मुख्य सरोकारवालासँग छलफलविना यस्तो समझदारी गर्दा भोलि जोखिम निम्तिने खतरा हुन्छ । त्यसैले हामीले सरोकारका विषय राखेका हौं । म्यानपावर व्यवसायीलाई मलेसियाकोे रोजगारी गुम्ने डर त बाहना मात्रै हो कि ? कामदारसँग कुस्त असुल्न नपाउँदाको छटपटी मात्रै होइन र यो ?
सरकारको आधा महिने सेवा शुल्कको निर्णयले व्यवसायीले विगतमा पाउँदै आएको सुविधा पनि खोसेको छ । हाल केही इलेक्टि्रक कम्पनीले एक महिनको सेवा शुल्क रोजगारदाताबाट ल्याउँथे । यसले त्यहाा जाने कामदारमाथिको आर्थिक भार हटेको थियो । तर, अब त सरकारी स्तरमै आधा महिना तोकिएपछि ती कम्पनीले पनि सेवा शुल्क घटाउने भए । यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले हामीसँग छलफल नै गरेन । चलीआएकै व्यवस्था भत्किने गरी थप अन्योल सिर्जना गरियो । त्यसैले अव्यवहारिक कुरा रहेसम्म व्यवसाय पारदर्शी बन्न गाह्रो हुन्छ । संघलाई त्यसका लागि पहल लिन पनि नैतिक संकट पर्छ । त्यसोभए तपाईंहरु सरकार र कामदारको हितका विरुद्ध आन्दोलनमा जाने मुडमा हुनुहुन्छ ?
सरकारले जस्तो व्यवहार गरे पनि हामी सरकारको निर्णयलाई अहिले धैर्यतापूर्वक ग्रहण गरिरहेका छौं । किनभने वैदेशिक रोजगारको मुख्य सरोकारवाला हामी नै हौं । जे-जस्ता सहमति, असहमति छन्, हामी सरकारसँगै राख्छौं । हाम्रो अभिभावक सरकार नै हो । समस्या पनि सरकारसँगै राख्ने हो, समाधानको उपाय पनि सरकारलाई हामी नै दिन्छौं । यो समझदारी परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि हामी सरकारलाई घच्घचाउँछौं । सरकारले सुन्छ कि सुन्दैन, त्यो उसैको कुरा हो । हामी त्यसका लागि पहल त गर्छौं, सरकारले गर्ने व्यवहारअनुरुप हेरेर निर्णय लिन्छौं । उसोभए सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी मलेसियामा कामदार पठाउने काममा लाग्नुहुन्छ ?